Afar qodob oo diiradda lagu saarayo Shirka ka furmay Muqdisho | KEYDMEDIA ONLINE
Afar qodob oo diiradda lagu saarayo Shirka ka furmay Muqdisho
Ra'iisul Wasaare Rooble ayaa shirka ka furay Teendhada Afisyooni, ku dhaw Garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde.
MUQDISHO, Soomaaliya - Ra'iisul Wasaare Rooble ayaa saakay ka furay Teendha Afisyooni Shir u dhaxeeya isaga iyo Madaxda maamullada dalka iyo duqa Muqdisho.
Shirkan oo ahaa inuu furmo Khamiistii lasoo dhaafay ayaa maanta lagu guuleystay inuu billowdo, waxaana ka qeybgalaya Deni, Axmed Madoobe, Qoor-Qoor, Lafta-Gareen, Guudlaawe iyo Cumar Filish.
Inta uu socdo Shirka, waxaa diiradda lagu saari doonaan qodobada kala ah:
1 - Dardargelinta howlaha doorashooyinka,
2 - Diyaarinta habraacyada doorashada Golaha Shacabka ,
3 - Raadinta dhaqaalaha ku baxaya doorashooyinka,
4 - Iyo sidii horey loogu wadi lahaa doorashooyinka dalka ka bilowday.
Villa Somalia ayaa ka jira khilaaf u dhaxeeya Farmaajo iyo Rooble, oo qeyb ka ah doorashadda iyo sida uu xafiiska Ra'iisul Wasaaraha u maamulayo hanaanka, oo Fahad Yaasiin faragelin ku hayo.
Rooble ayaa sameeyay dedaallo badan, balse weli kuma guuleysan inuu doorasho hufan, xor iyo xalaal ah, oo waqtigeeda ku dhacda inuu ka qabto dalka, wuxuuna la kulmaya caqabado awoodiisa ka baxsan inuu xaliyo.
Waxaa taagan khilaafka gudiga Somaliland, arinta Gedo iyo gobolka Hiiraan oo laga diidan yahay maamulka Cali Guudlaawe, waxaana suurta-gal ah in Shirka ka furmay maanta Afisyooni wax ka bedel lagu sameeyay heshiiskii May 27, ee ah in labo degaan ay ka dhacdo doorashadda.
Labada degaan maadaama dhibaatado ka taagan tahay in doorashadda lagu qabto meelaha qaar, sida Jubbaland, Koonfur Galbeed iyo HirShabeelle, waxaa laga yaabaa in hal degaan lagu soo koobo.
0 Comments Topics: afisyooni doorashadda soomaaliya